CAJIIB: Ciyaartoy Muslim Ah Oo Waddooyinka Ku Iibiya Afurka Ramadaanta Oo Dareenkiisa Iyo Waxa Ku Qasbay Ka Hadlay - Gool24.Net
CAJIIB: Ciyaartoy Muslim Ah Oo Waddooyinka Ku Iibiya Afurka Ramadaanta Oo Dareenkiisa Iyo Waxa Ku Qasbay Ka Hadlay
Saamaynta dhaqaale ee uu caabuqa Korona dunida ku keenay ayaa noqonaya mid taabta nolosha Balaayiin dad ah waxaana kamida shaqsiyaadka uu sida gaarka ah usii saamaynayo xiddigaha kala duwan ee kubadda cagta.
Mahrous Mahamoud oo ah daafac ree Masar ah oo ka tirsan kooxda heerka labaad ee dalkaas ee Beni Suef SC ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku shaqaysanayay dhinacyada wadooyinka si uu qoyskiisa u quudiyo.
Kaddib markii ciyaaraha kala duwan ee dalkaasi Masar gabi ahaanba la joojiyay badhtamihii bishii March, Mahrous Mahamoud ayaa waayay 200 oo dollar oo kamid ah mushaharkiisii bilaha ahaa.
Si uu qoyskiisa u quudiyo, Mahrous ayaa bilaabay laba shaqo oo mida koowaad ay tahay inuu ka shaqeeyo dhismayaasha halka mida labaad ay tahay inuu wadooyinka ku iibiyo macmacaanka iyo afurada ramadaanka isaga oo ku sugan Mafalut oo 350 KM u jirta Cairo.
“Waa inaan qabto nooc kasta oo shaqo ah si aan iyaga u caawiyo oon u quudiyo” Ayuu ugu horreynba hadalkiisa ku bilaabay Mahrous Mahamoud oo saxaafada la hadlay.
Mahamoud ayaa maalinle toddoba dollar ka hela shaqada dhismaha guryaha balse kaliya laba maalmood ayuu toddobaadkii ka shaqeeyaa shaqadaas isaga oo xooga saara mida iibinta macmacaanka.
Xiddigan oo kasoo jeeda qoys ka kooban labadiisa waalid iyo walaalkii oo ka yar ayaa haatan si buuxda uga masuul ah nolosha qoyskiisa maadaama oo uu aabihii oo ku shaqayn jiray darawalnimo sababo wadno xanuun u hawl-gabay.